Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka hadlay hadal xiisad dhaliyay – Radio Daljir
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka hadlay hadal xiisad dhaliyay
Seteembar 25, 2018 10:16 b 0
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay in si khaldan loo tarjumay hadal uu sheegay oo ahaa in calaadda la horkeeno dadkii ka dambeeyey dilkii naxariis la’aanta ee loo gaystay Axmed Dowle oo dab lagu gubay.
Waxaa uu sheegay guddoomiyaha hadalkiisa inuu ula jeedin xildhibaan Xuseen Iidow oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya.
“Ma haboona in la siyaasadeeyo warkii ahaa in caddaalad la soo saaro danbiilayaashii ka danbeeyey falkii waxuushnimada ee loo geystay marxuum Axmed Dowlo oo Xildhiban Xuseen Iidow wax lug ah kuma laha damaanad raadinta falgaboodkan waana la siyaasadeeyey”ayuu yiri Eng. Yariisow.
Guddoomiyaha ayaa ku celiyay mar kalle in calaad la horkeeno dadkii gaystay falkaasi.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhowaan sheegay ragga dilka gaystay qaarkood oo la xiray inay jiraan xildhibaano katirsan baarlamaanka oo raadinaya damaanad in ay kusii daayaan dadka falkaasi gaystay.
Madaxweynaha Gaas“ Amniga magaalada Bosaaso waa in wax laga qabtaa (dhegayso )
Cabdikariin Qalbi Dhagax oo lagu soo dhoweeyey magaalada Hargaysa